Pradesh News | » सरकारले घटायो परीक्षण शुल्क, दुई हजारमै पिसिआर परीक्षण हुने सरकारले घटायो परीक्षण शुल्क, दुई हजारमै पिसिआर परीक्षण हुने – Pradesh News
मुख्य खबर स्वास्थ्य
सरकारले घटायो परीक्षण शुल्क, दुई हजारमै पिसिआर परीक्षण हुने
काठमाडौं । सरकारले कोरोना संक्रमण परीक्षणको शुल्क घटाएको छ । अब सरकारी र निजी सबै ल्याबमा दुई हजार रुपैयाँमा पिसिआर टेष्ट हुनेछ । रिएजेन्ट र अन्य सामानको मूल्य घटेको आधारमा नयाँ मूल्य निर्धारण गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा. डा. जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए । सुरुमा पिसिअर टेष्टको शुल्क ५५०० तोकिएको थियो । पछिल्लो समय त्यसलाई घटाएर ४ हजार रुपैयाँ बनाइएको थियो । यसैबीच चार वटा अस्पतालमा पिसिअर जाँच गर्दा फरक फरक रिपोर्ट आएको गुनासो आएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले छानविन थालेको छ ।
त्यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा थप १०३९ जनामा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को संक्रमण पुष्टि भएको छ । देशभरको प्रयोगशालामा ९ हजार १६५ नमुना परीक्षण गर्दा ३६५ महिला र ६७४ पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको हो । यससँगै कुल संक्रमितको संख्या ५४ हजार १५९ पुगेको छ ।
उनीहरुमध्ये ३४५ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३८ हजार ६९७ जना संक्रमण मुक्त भएका छन् । पछिल्लो २४ घण्टामा ११७३ जना डिस्चार्ज भएका छन् । देशभरमा १५ हजार ११७ संक्रिय संक्रमित रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।